Ku Iibso Kumbuyuutarradan Ciyaaraha ugu Fiican Miisaaniyadaada Hadda -
Bogga ugu weyn Ku iibso PC-yada Ciyaaraha ugu Fiican Miisaaniyadaada Hadda
Ciyaartu waxay noqon kartaa mid qaali ah markaad isku darto dinaar kasta oo la kharash gareeyo muddada dheer. Iibsashada qalab khaldan ama qaybo aan ku haboonayn waa mid ka mid ah sababaha ciyaartoygu ku qaataan wax ka badan inta ay u baahan yihiin. Laakiin mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad sameyso hal mar oo aad saxdo marka ugu horeysa si aad jeebabkaaga u buuxiso. Aan u dhuuxno sida aad tan ku gaari karto!
Wax ka baro PC-ga ciyaaraha miisaaniyada ugu fiican ee aad hadda iibsan karto.
Waa maxay PC-ga ciyaaraha?
Kumbiyuutarka ciyaaraha waa kumbiyuutar gaar ah oo loo dhisay si gaar ah loogu ciyaaro ciyaaraha fiidyaha wuxuuna inta badan ka fog yahay shaqadaada desktop-ka ama PC-ga guriga qaab ahaan iyo haa, mararka qaarkood muuqaal ahaan. Waxaad dhahdaa waa la cusbooneysiiyay!
Kumbuyuutarrada ciyaaraha, ama waxaad wici kartaa kombuyuutarrada ciyaaraha, waxay si fiican ugu yaqaanaan kaadhadhkooda fiidiyoowga ah ee waxqabadka sarreeya iyo unugyada farsamaynta dhexe ee xisaabaadka sare leh ee leh waxqabadka cayriin ee ciyaaraha adduunka.
In kasta oo ay caan ku yihiin ciyaaraha adduunka ee Call of Duty iyo tartanka baabuurta, sidoo kale waxa la qaatay tafatirayaasha fiidiyaha iyada oo ay ugu wacan tahay waxqabadkooda sare iyo garaafyada.
Waxaa jira PC gaming oo lagu iibsan karo miisaaniyad oo weli bixiya khibradda ciyaaraha tayada ugu fiican.
Tayada PC-ga ciyaaraha waa muhiim?
Ciyaartoyda badan iyo kuwa xiiseeya kombuyuutarku waxay doortaan inay dhaafaan CPU(-yada) iyo GPU(-yada) si ay u helaan waxqabad dheeri ah. Korontada dheeriga ah ee loo baahan yahay in la dhaafo mid ka mid ah cutubyada farsamaynta inta badan waxay u baahan tahay qaboojin dheeraad ah, iyada oo la adeegsanayo qaboojinta hawada la cusboonaysiiyay ama qaboojinta biyaha.
Masiibada faafay, qiimayaashu waxay ahaayeen kuwo aan la saadaalin karin iyadoo qiimaha qaar ka mid ah qalabyada ciyaaraha iyo qaybaha ay kor u kacayaan halka kuwa kalena ay hoos u dhacayaan. Si kastaba ha ahaatee, wax si joogto ah u socdaa waa tayada khibradda ciyaaraha.
Ciyaaruhu way sii fiicnaanayaan oo sidaas si la mid ah awoodda wax qabad ee loo baahan yahay si loogu raaxaysto khibradda ciyaaraha oo dhan. Tani waxay ku baaqaysaa hantida ugu fiican ee ciyaaraha aad ku heli karto gacmahaaga si aad uga adkaato kooxda naga soo horjeeda ee boqolaal mayl u jirta dhamaadka dhamaadka.
Waxaad u baahan tahay GPU-ga ugu fiican, CPU-ga ugu fiican, xusuusta xoogga badan, iyo qaar kaloo badan. Inta badan qaybaha ciyaaraha durugsan iyo kuwa wax-ku-kordhinta ah waxay caadi ahaan ku yimaadaan qiimo aad uga sarreeya marka loo eego PC-ga ciyaaraha hore loo dhisay laakiin taasi waxay ka muuqataa khibradda ciyaaraha ee aad rabto.
Waa maxay sababta aan u iibsado PC-ga ciyaaraha?
Wax walba ka wanaagsan! Kumbuyuutarku wuxuu la mid yahay PC-ga caadiga ah laakiin leh xallinta bandhig wanaagsan, wax soo saar maqal oo wanaagsan, iyo dabcan aad u dhaqso badan. Kumbuyuutarrada ciyaaraha waxay qabtaan ciyaaro aad u badan oo kombayutarka caadiga ahi uu daqiiqado furan yahay.
Kama hadlayno Solitaire halkan, waxaan ka hadlaynaa Adduunka Cusub, Hitman 3, Battlefield 6 iyo wax kaloo badan. Haddii aanad qiyaasin ilaa hadda, ma jirto si aad ula tartanto qof kaa soo horjeeda oo si buuxda u qalabaysan ciyaarta multiplayer online ah oo aan lahayn PC game.
Farqiga ugu muuqda ee aad ogaan doonto waa waqtiga dib u dhaca. Kumbuyuutarrada ciyaaraha guud ahaan way ka yar yihiin kombuyuutarrada kale, tanina waa sababta oo ah qalabka loo dhisay si uu u xakameeyo koodka ka dhigaya ciyaarta mid dhab ah.
Kumbuyuutarrada ciyaaraha ayaa sidoo kale aad uga saxsan, iyadoo la sii wado qaadashada ciyaaraha intarneedka ee ciyaaraha badan, taasi runtii waa heshiis weyn.
PC-ga ciyaaraha waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu daawado filimadii ugu dambeeyay, lagu tafatiro muuqaaladii ugu dambeeyay iyo in lagu shaqeeyo dukumeenti Word ah sida PC kasta oo kale, kaliya markan aad ayay u fiican tahay.
Hoosta, waxaan ka wada hadli doonaa PC-ga ciyaaraha ugu fiican ee aad ka iibsan karto miisaaniyad.
Akhri: Talooyin yar oo loogu talagalay Khamaarka Thailand
Maxaan Ka Fiirsadaa PC-ga Ciyaaraha Miisaaniyadda Ugu Fiican?
Hagaag hadda waad ogtahay sababta aad ugu baahan tahay cusboonaysiinta, sidee ku saabsan tahay inaad hesho casriyeyn sax ah. Waa kuwan sifooyinka ugu sarreeya ee ay tahay inaad iska ilaaliso markaad iibsanayso PC-ga ciyaaraha;
Ciyaartoyga kastaa wuu ogyahay in tani ay tahay mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee aad naftaada ku heli karto, iyo hadda adigana sidoo kale.
Kaarka fiidyowgu wuxuu socodsiiyaa dhammaan walxaha aragga ee ciyaartaada waxqabad-buuxsan.
Sida ugu dhakhsaha badan ee kaadhka fiidyowga, ayaa ka sii fiicnaan doona oo u fiicnaan doona ciyaarahaaga. Lagu cabbiray fiimyada ilbiriqsigiiba, aka fps, waxaan ku talinaynaa 60 fareemay ilbiriqsikii.
In kastoo miisaaniyad ku jirto, waxaad dejin kartaa kaadhka fiidiyowga 30fps.
Sida kaarka muuqaalku u qabanayo dhammaan hawlaha garaafka, processor-ka (CPU) ayaa maamula ciyaarta adduunka. Ka fakar kuwa kaa soo horjeeda ee kombuyuutarku gacanta ku hayo iyo halka ay xabbadu tagto. CPU-gu waxa ay xisaabinaysaa in aad ka tooganayso halka kaadhka muqaalku uu ka muuqdo qarax.
In kasta oo processor-ku muhiim yahay, kaadhka garaafyada ayaa weli ah qaybta saamaynta ugu badan ku leh ciyaaraha aad jeceshahay.
Xadka hoose marka ay timaado ciyaaraha waa processor-ka Intel Core i5.
Qof kastaa wuu neceb yahay wakhtiyada rarka, gaar ahaan ciyaartoyda. SSD-da, taasi waa wax la soo dhaafay. SSD waxay kala badh ka dhigtaa bilowga iyo wakhtiga rarida, si aad si dhakhso ah ugu diyaargarowdo heerka xiga.
Haddii aad rabto inaad u qaado heerka ku xiga, waxaad dooran kartaa SSD-yo badan oo ku jira Raid 0.
Marka lagu jiro dejinta Raid 0, SSD kastaa waxay qabataa kala badh shaqada. Xawaaruhu wuu labanlaabmaa, si la mid ah haddii aad ku bilaabi lahayd qoraal laba gacmood.
Kumbiyuutarka ciyaaraha, ugu yaraan 8GB RAM ayaa ku filan. RAM-ku waxa uu la mid yahay suunka wax lagu qoro ee processor-kaagu si dhakhso ah u arko macluumaadka muhiimka ah.
Haddii aad rabto inaad daawato ciyaaraha, 16 ama 32GB ayaa loo baahan yahay.
Haddii aad rabto inaad u diyaargarowdo mustaqbalka, waxaad rabtaa inaad haysato ugu yaraan 16GB RAM ama ka badan.
Kaararka fiidiyowga ee NVIDIA GeForce GTX
Kaararka NVIDIA GeForce GTX waa jiilkii hore ee kaararka fiidiyowga ee NVIDIA. Taxanahan waxa ka mid ah kaadhadhka fiidyaha ee ciyaartoyda cusub, laakiin sidoo kale kaadhadhka fiidyowga oo si dadaal la'aan ah u socodsiiya ciyaarihii ugu dambeeyay ee goobaha ultra.
GTX 1650 waa moodalka heerka gelitaanka halkan, halka GTX 1660 Ti uu yahay moodelka ugu sarreeya ee ciyaartoyga dalbanaya.
Si kastaba ha noqotee ciyaarta aad ciyaareyso, kaarka fiidiyowga ee 'GTX' ayaa had iyo jeer dabooli doona.
Kaararka fiidiyowga ee NVIDIA GeForce RTX 2000
Kaararka fiidyaha ee NVIDIA ee ugu dambeeyay waa kaararka fiidiyoowga ee RTX. Kaararkani aad bay ugu habboon yihiin ciyaaraha hadda socda. Kaararka RTX waxay leeyihiin xusuusta fiidiyaha ee degdegga ah waxayna inta badan diiradda saaraan raadinta rayiga.
Tani waa tignoolajiyada soo bandhigta iftiinka iyo milicsiga si ka wanaagsan oo xaqiiqo ah, taasoo ka dhigaysa inaad mooddo inaad filim daawanayso.
Kaararka fiidiyowga ee RTX, RTX 2060 waa nooca ugu awoodda yar iyo RTX 2080 Ti waa kan ugu awoodda badan taxanaha.
NVIDIA GeForce RTX 3000 kaararka video taxane ah
Kaararka fiidiyoowga ee RTX 3000 waa kuwa ugu awoodda badan. Hirgelinta Ampere, oo ah jiilkii labaad ee dhismaha RTX, koofiyadaha raadraaca raajada badan, iyo koodhka Tensor, waxaad haysataa sawiro macquul ah.
Nooca ugu awoodda yar ee taxanaha RTX 3000 waa RTX 3060. Ciyaartoyda hardcore, waxaa jira RTX 3090, oo ah kaadhka fiidiyowga ugu awoodda badan xilligan.
Iyada oo 24GB ee xusuusta fiidiyowga ee kaadhka fiidiyowga, waxaad ku ciyaari kartaa ciyaaraha ugu cusub goobaha ugu sarreeya ee 4K dhibaato la'aan.
Hoos waxaan ka wada hadli doonaa PC ciyaaraha miisaaniyada ugu fiican.
Kiiska iyo agabka
Kumbuyuutarku wuxuu leeyahay qalab dheeri ah, sida gidaar dhalo ah iyo iftiin RGB ah oo ku dhex jira. Marka lagu daro muuqaalka fikirka, tani waxay hubineysaa in PC-ga ciyaaraha dhabta ah uu ka badan yahay kiis kaliya oo leh qaybo. Waxaad sidoo kale siin kartaa gudaha kiiska wax dheeraad ah, sida qaboojinta biyaha.
Sidan, Processor-kaagu wuxuu had iyo jeer ku sugnaadaa heerkulka saxda ah, xitaa haddii aad wax badan weydiiso CPU-gaaga.
10-ka PC ee ugu ciyaarta ugu fiican ee ay tahay inaad ku iibsato miisaaniyad 2021
Kuwani waa PC-ga ciyaaraha miisaaniyada ugu fiican iyo kombiyuutarada ay tahay inaad iibsato 2021.
#1. Cyberpower Gamer Xtreme
Waxay ku jirtaa magaca, Cyberpower Gamer Xtreme! Tani waa mid ka mid ah PC-ga ciyaaraha miisaaniyada ugu fiican. Ciyaar aad u daran oo ah qiimaha ugu fiican!
Cyberpower Gamer Xtreme wuxuu bixiyaa waxqabad gaar ah oo leh Nvidia GTX 1060 3GB taasoo ka dhigaysa garaafyada soo jiidashada xitaa xallinta sare iyo 8GB DDR4 isku dhafan oo ka caawiya habsami u socodka ciyaarta.
Kaydinta sidoo kale waa mid ka mid ah dhinacyada ugu habboon ee PC-gan ee xalka ciyaaraha oo leh SSD ee 120GB iyo 1TB ee kaydinta la fidin karo. PC-gu waxa kale oo uu la socdaa qaboojiye aan caadi ahayn oo guud ahaan waxa aad ku helaysaa qiimo weyn lacagtaada. Filo kuleyl yar, ciyaaro badan!
Ma aha Cyberpower Gamer Xtreme iyada oo aan lahayn nalka LED-ka ee aad u fiican. Cyberpower Gamer Xtreme wuxuu la yimaadaa awood yar oo SSD ah taas oo cirif ku ah khibradaada ciyaaraha.
120GB SSD wax badan ma qaban doonto haddii aad raadinayso inaad ku rakibto ciyaaro badan.
Mar labaad, qaybta ugu weyn ayaa ah in Gamer Xtreme sidoo kale si fudud loo cusboonaysiin karo waayo-aragnimada buuxda haddii taasi aysan kugu filneyn.
Kaydinta: 120GB SSD + 1TB HDD 7200RPM
#2. HP Pavilion Gaming Desktop
HP Pavilion Gaming Desktop wuxuu la yimaadaa isku xirka guddiga hore ee ballaaran iyo wax qabad weyn oo qiimo saaxiibtinimo leh waa inaan ku daro.
Magaca taxanaha waxa ku jira dhawr doorasho oo kombuyuutar ah oo horay loo dhisay kuwaas oo dhamaantood la socda qiimo jaban.
Tani hubaal waa mid ka mid ah kombiyuutarada ciyaaraha ugu fiican si aad u hesho miisaaniyad. GPU wuxuu u shaqeeyaa si cajiib ah marka lagu daro badeecad kale oo AMD - AMD RX 580.
Kuma iman kaydin la fidin karo oo la isku daray oo loo tixgelin karo khalad. Qalabka ciyaarta ee dheeriga ah, HP Pavilion Gaming Desk wuxuu la imanayaa dekedo USB isku dhafan.
Ikhtiyaarada la taaban karo waxaa ka mid ah USB 3.1 Type-C iyo kala duwanaansho kale oo badan oo deked ah oo loogu talagalay dhammaan lifaaqyada ciyaaraha.
Waxay leedahay 8 GB oo RAM ah iyo qaabeynta DDR4 oo ay weheliso 1TB kaydinta. Waxa kaliya ee hoos u dhaca nidaamka waa la'aantiisa SSD, laakiin I / O casriga ah ee leh USB 3.1 Type-C iyo dekedaha badan ee USB ayaa ka dhigaya nidaam isku dhafan oo ku fiican shaqada iyo ciyaarta.
Qaboojintu sidoo kale maaha mid aad u fiican sida qofku jeclaan lahaa, laakiin hey, qiimuhu wali waa sax weyn yahay.
CPU: AMD Ryzen 5 Taxanaha
Kaydinta: 1TB HDD 7200RPM
#3. SkyTech Archangel
Nvidia GTX 1050 Ti GPU oo leh 4GB. Kumbuyuutarku wuxuu la socdaa kayd isku dhafan oo 1TB ah wuxuuna si fudud ugu habboonaan karaa qaar badan oo ka mid ah ciyaaraha casriga ah ee ugu fiican marka ay timaado waxqabadka.
SkyTech Archaeel waa mid ka mid ah xulashooyinka PC-ga ee ciyaarta miisaaniyadeed ee ugu wanaagsan sababtoo ah kor u qaadida awoodda wax-qabadka ee PC-ga waa fududahay. SkyTech Archaeel kaliya maaha inay la timaado isku-dhafka AMD Ryzen Series 3 CPU laakiin sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu ku ciyaaro inta badan ciyaaraha 1080p ee goobaha sare.
Dhinaca hoose ayaa ah in aanu la iman SSD qiimahaas.
Kani waa PC-ga ciyaaraha miisaaniyada kale ee ugu fiican.
Laakiin iyada oo taasi jirto, SkyTech Archaeel wali waxay u taagan tahay mid ka mid ah kombuyuutarrada ciyaaraha ugu fiican ee aad ku heli karto qiimo jaban oo leh tayada wax u dhimaysa.
CPU: AMD Ryzen 3 Taxanaha
#4. Acer Gaming Desktop Aspire TC-780-UR1E
Acer Gaming Desktop Aspire TC-780-UR1E waxay ku siinaysaa muuqaal iyo waxqabad miisaaniyadeed.
Nvidia Geforce 1050 oo leh 2GB iyo 8GB oo RAM ah ayaa muuqaallada ka dhigaya kuwo siman iyo xusuusta gudaha si fiican ayaa loogu habeeyey inay ku socoto inta badan ciyaaraha ugu sarreeya sanadkan.
Ilaa 1TB ee kaydinta ayaa u oggolaan doonta rakibaadda ciyaaro kala duwan, marka lagu daro dekedaha badan ee USB-ga iyo processor-ka AMD Ryzen Series 5.
Mashruucu wuxuu ka kooban yahay Intel's Core i5-7400 ee CPU iyo AMD's R9 360 ka weyn ee kaararka garaafyada. Kuwani waa qaybaha jiilka hore, laakiin isku-darka ayaa weli awood u leh ciyaaraha 1080p ee goobaha dhexdhexaadka ah.
Acer Gaming Desktop Aspire TC-780-UR1E waxaa ku jira 256GB SSD, way fududahay in la cusboonaysiiyo, waxayna bixisaa wax qabad weyn qiimaha. Caqabadda ugu weyn ee ay soo bandhigaysaa waa qaybo duug ah.
In kasta oo cusboonaysiinta kaadhka garaafyada ay hagaajin doonto khibradaada guud.
Kaydinta: 256GB SSD
#5. ABS Simpli
ABS Simpli waa PC-ga ciyaaraha ugu fiican ee bilowga ah wuxuuna hayaa 30-40fps deggan meel dhexaad/hoose ah waana wax fudud in la cusboonaysiiyo.
Sida tafaariiqle sare ee PC, ABS Computer Technologies waxay bixisaa nidaam horay loo dhisay oo leh kaadhka garaafyada kaas oo kaliya kuu ogolaanaya inaad ku ciyaarto ciyaaraha goobaha hoose. Waa jeebka-saaxiibtinimo laakiin qiimaha tayada.
Marar badan, casriyaynta fudud ee SSD iyo kaarka garaafyada ka wanaagsan waxay aad ugu fogaan doontaa samaynta PC-ga ciyaaraha-dhamaadka sare leh.
In kasta oo GPU-gu xaqiiqdii isticmaali karo casriyeyn.
Kaydinta: 1TB HDD
#6. Corsair aargudasho i7200
Ciyaar xoog leh! Taasi waa waxa Corsair Vengeance i7200 ku siinaya qiimo jaban. In kasta oo qaabaynta kiis-kii hore iyo la'aanta hareeraheeda ay hoos u dhac ku tahay, Corsair Vengeance i7200 waxay la timid qalab awood leh, qalab-ciyaar ku jihaysan iyo iftiin, saameeyn nalal la beddeli karo.
Wax kharash ah kuma baxayo sida qaar ka mid ah tartamayaasheeda, laakiin wali waxay ku siinaysaa helitaanka qaar ka mid ah qalabka ugu awooda badan suuqa. Aargoosiga i7200 dhis oo la shaqayn doona habayntaada ha ahaato 4K ama QHD.
Marka laga reebo CPU-yada ilaa Intel Core i9-10850K iyo GPU-yada ilaa Nvidia GeForce RTX 3090, waxay sidoo kale leedahay iftiin RGB ah oo qurux badan, muraayad dhinaca muraayadda ah oo dhadhan fiican leh, iyo taageerayaal aad u aamusan.
VR Diyaar ah: Haa
Processor: Ilaa Intel Core i9-10850K/AMD Ryzen 9 5900X
RAM: Ilaa 64 GBGraphics Card: Ilaa Nvidia GeForce RTX 3090
Kaydinta: Ilaa laba 2 TB SSDs
#7. Alienware Aurora Ryzen Edition R10
Alienware Aurora Ryzen Edition R10 PC waa mid weyn oo culus, laakiin taasi waa sababta oo ah waxay kuxirantahay safka-sare ee AMD CPUs iyo GPU-yada. Waa qalab awood u leh HD buuxa, QHD, ama xitaa ciyaaraha 4K, laakiin maaha mid qaali ah sida nidaamyadani u yimaadaan.
Waxay bixisaa qaybo AMD oo wanaagsan iyo waxqabadka ciyaaraha adag ee qiimo macquul ah.
Aurora Ryzen Edition R10 sidoo kale waxaa loo yaqaanaa inay aad ugu dheer tahay mid jecel naqshad adag, si kastaba ha ahaatee waxay ka kooban tahay dhammaan kuwa leh ciyaaraha aaminnimada sare leh ee qaybaha AMD.
Processor: Ilaa AMD Ryzen 9 5950X
RAM: Ilaa 128 GB
Kaarka garaafyada: AMD Radeon 6800 XT
Kaydinta: Ilaa 2 TB SSD + 2 TB HDD
Agabka: Dell Multi-Media Keyboard, Dell Optical Mouse MS116AW
#8. MSI MEG Trident X
Naqshadaynta isafgaradka leh ee caqliga leh ayaa ah waxa MSI MEG Trident X ka dhigaya mid caan ah. Ma jiraan wax aad u adag laakiin weli nadiif ah oo ku filan si loo sameeyo aragti adag.
MSI MEG waxay diyaar u tahay inay la socoto waxqabad xoog leh iyo qaboojin deggan. Waxay u soo baxdaa sidii qaali waxayna sidoo kale leedahay meelo hoose marka loo eego tartamayaasha liiskan, laakiin kumbuyuutarka ciyaarta waxaa loogu talagalay inuu ku siiyo HD buuxa, QHD, ama UHD khibrad leh oo shaqeynaya.
Iyada oo leh noocyo kala duwan oo processor, GPU, iyo RAM ah oo aad ka dooran karto, waxaad awoodi doontaa inaad habayso mishiinka u shaqeeya ciyaarahaaga, iyo kormeerahaaga.
Processor: Ilaa Intel Core i9-10900K, 3.7-5.3 GHz
RAM: Ilaa 64 GB
Kaarka garaafyada: Ilaa Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Kaydinta: Ilaa 1 TB SSD + 1 TB HDD
Agabka: MSI Clutch GM11 Mouse, MSI Vigor GK30 Kiiboodhka
9.Dell XPS 8940
Dell XPS 8940! Tani adigaa iska leh haddii aad raadinayso naqshad yar, nashqad yar iyo dekedo badan oo leh shaki la'aan waxqabad weyn oo ku qalabaysan wadista warbaahinta jirka.
In kasta oo aanay lahayn qaabayn aad u awood badan iyo ikhtiyaaro kaydinta xaddidan, Dell XPS 8940 waa kombuyuutar ciyaaraha aadka loogu taliyay ee suuqa hadda jira.
Qofkasta oo ku jira miisaaniyada wuu ogyahay waxa tani xado sababtoo ah waa mid la awoodi karo oo la socota wax kasta oo aad u baahan tahay si kor loogu qaado khibradaada ciyaaraha.
Processor: Ilaa 10-aad Gen Intel Core i9-10900K
Kaarka sawirada: Ilaa Nvidia GeForce RTX 3070
Akhri: 15 Siyaabood oo lacag looga helo ciyaaraha 2021
#10. PC Millennium asal ahaan
Millennium-ka asalka ah ee PC waxa uu bixiyaa qalabyo awood leh, tayo dhisme heer sare ah, qaboojin aad u deggan, iyo waxqabad aad u fiican.
In kasta oo ay aad qaali ugu tahay waxa aad hesho iyada oo aan lahayn jiir iyo kiiboodhka bilaashka ah, $2300 waxay u egtahay gorgortan weyn Ryzen 5 5600X, GeForce RTX 3060 Ti, 16GB ee Corsair Vengeance RAM (3200Mhz), 120mm dhan-hal ah Qaboojiyaha CPU iyo 240GB OS drive waxaad heli doontaa. Waxay noqon kartaa tobnaad laakiin waxay u qalantaa dinaar kasta.
Processor: Ilaa Intel i9-10900K ama AMD Ryzen 9 5950X
RAM: Ilaa 64GB
Kaarka sawirada: Ilaa Nvidia RTX 3090 ama Radeon RX 6800 XT
Kaydinta: Ilaa 4TB NVMe; 8TB SSD; 16TB HDD
Waxaan ku kalsoonahay inaad hadda heli karto qalabkaaga ciyaaraha si sax ah xitaa miisaaniyad ka dib markaad akhrido maqaalkan. Hadda waxaad si kalsooni leh ula qabsan kartaa kuwa kaa soo horjeeda ee adduunka ciyaaraha leh PC-ga miisaaniyada ugu fiican.
Waanu ku raaxaysanaynaa akhrinta faallooyinkaaga si la mid ah akhristayaashayada. Hal ama laba ku dhaaf faallooyinka!
Intel miyay ka fiican tahay AMD?
Kumbuyuutarka ciyaaraha miisaaniyada miyuu u qalmaa?
8GB RAM ma u fiican yahay ciyaaraha?
AMD ma ka jaban tahay Intel?
Immisa ayaan uga baahanahay PC-ga ciyaaraha wanaagsan?
$500 ka kor
Iibsiga ugu Fiican: https://www.bestbuy.com/
Dib -u -eegista Gamingjobsonline.Com 2021: Ma u Qalmaa | Sharci Ama Fadeexad
15 Siyaabood oo lacag looga helo ciyaaraha 2021
Sida Loo Codsado Medicaid gudaha Missouri
10 Shirkadaha Shukulaatada Ganacsi ee Caddaaladda ah ee Adduunka
Chocolate waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu macaan adduunka - laakiin waxaan hubaa inaad dareemi doonto ...
Haddii aad waligaa maqashay qof sheegaya inay ku socon doonaan wax-soo-saarka, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto waxa ay ula jeedaan.…
Kahor intaanan si qoto dheer u fahmin goorta la iibsanayo saamiyada ama goorta la iibinayo saamiyada, waxaan…
Kaarka Amaahda ee Abaalmarinta Ugu Fiican UK | Wareegga Hantida 2022
Kaararka amaahdu waa mid ka mid ah tignoolajiyada nolosha fudud ee UK sida adduunka intiisa kale, ama…